Manipulator tsara indrindra miaraka amin'ny mpanamboatra kaopy suction sy orinasa |Tongli
Tongli manipulators amin'ny suction kaopy dia be mpampiasa amin'ny tsy manimba ny fitantanana ny takelaka isan-karazany, anisan'izany ny harafesiny mahatohitra takelaka, aluminium takelaka, titane takelaka, composite tontonana, sns.
Izy ireo koa dia be mpampiasa amin'ny laser fanapahana milina, plasma fanapahana milina, rano-jet fanapahana milina, milina fanaraha-maso isa, sns.
Ny kaopy suction fitaovana vita amin'ny aliminioma natsipy tamin'ny indray mandeha avo-tsindry maty-fanariana lasitra, manana toetra ny maivana lanja, hery avo, detachable suction kaopy fingotra, mora soloina, tontolo iainana ary manana vidiny-mahomby.
Rafitra pneumatic madio vaovao, tsy mila mampifandray herinaratra, tsy misy fiampangana, fanandratana pneumatic, adsorption pneumatic, ara-toekarena ary azo ampiharina
Ny toeran'ny sucker dia azo ovaina mifanaraka amin'ny fiovan'ny refy amin'ny takelaka samihafa.
Ny manipulators suction-cup dia tsara amin'ny fitanana zavatra amin'ny sehatra fisaka sy tsy tapaka, noho izany dia ampiasaina amin'ny lozisialy, famokarana sy fanasokajiana, indostrian'ny sakafo, famokarana fiara, fikarakarana fitaratra, fikarakarana vy ary sehatra hafa, ary ny isa sy ny karazany no lehibe indrindra. amin'ny fisamborana manipulators.
Andao hanasokajy araka ny tanjon'ny fanatanterahana ary hojerentsika ny fampiharana ny manipulator kaopy suction:
1. Fitrandrahana entana
Ampiasaina indrindra amin'ny fampiakarana sy famindrana zavatra mavesatra izy io.
Toy ny baoritra stacking sy ny fonosana fisamborana amin'ny indostria lozisialy;
Toy ny fampiakarana sy fisamborana ireo kojakoja sy vokatra amin'ny indostria mekanika sy simika;
Toy ny fitaratra, ny ampahany amin'ny takelaka metaly misambotra sy manodina;
Toy ny famindrana entana eran'ny seranam-piaramanidina sy ny fikarakarana;
Toy ny fampiroboroboana sy famindrana ampahany lehibe.
Ireo manipulators dia tsotra amin'ny rafitra.Ny ankamaroan'izy ireo dia fitaovam-piadiana malefaka misy kaopy fisotro.Tonga amin'ny zavatra voatondro amin'ny alalan'ny fiasan'olombelona izy ireo, ary saika tsy misy rafitra fanaraha-maso.Mora ny vidiny, ary miely patrana ny fampiharana.Ny fanoloana ny fikarakarana tanana sy ny fampiakarana zavatra mavesatra no tena ilaina.
Ny milina somary sarotra kokoa miaraka amin'ny ambaratongan'ny fahalalahana kely kokoa dia afaka mahatsapa ny fanonganana ireo zavatra voasambotra.
2. Palletizing mandeha ho azy
Matetika izy io no ampiasaina amin'ny logistika, fanatobiana entana ary seranan-tsambo.Izy io dia ampiasaina amin'ny fisamborana mandeha ho azy ny fitaovana sy ny asa stacking raikitra.
Ohatra, fanasokajiana sy palletizing amin'ny indostrian'ny lozisialy sy ny orinasa famokarana;
Ohatra, fitahirizana, fitehirizana entana ao amin’ny seranan-tsambo;
Ity karazana manipulator ity dia manana sandry robot izay afaka mihetsika ho azy, saingy ny ankamaroan'izy ireo dia manana fahalalahana ambany ary mahavita fihetsika tsotra.Tsy avo lenta ny fahitsiana toerana, ny programa sy ny rafitra fanaraha-maso dia somary tsotra, ary ny actuator dia tsy fitaovana mazava tsara.
T3.Fisamborana sy fanapariahana mazava tsara
Any amin'ny sehatra sasany, ny manipulators dia takiana amin'ny fahazoana tsara sy fametrahana mazava tsara ny zavatra, toy ny indostrian'ny sakafo, fitsaboana ary elektronika.Ireo indostria ireo dia manana fepetra avo lenta amin'ny fahadiovana, ary ny manipulators kaopy suction dia be mpampiasa.Mba hahazoana toerana mazava tsara dia matetika ampiasaina ny fitaovam-piadiana robotika multi-degree-of-freedom.
Ny haavon'ny fahalalahan'ny manipulator, ny rafitra dia maro sy isan-karazany ihany koa.
Ny mpihetsiketsika amin'ny fanodikodinana kaopy fisotro dia kaopy fisotro madio, izay afaka mahazo zavatra isan-karazany.Ny kaopy fisotro madio dia manana hery setroka avo lenta ary madio sy madio.Ankasitrahan'ny indostria sasany izay mitaky fahadiovana.Ny manipulator dia azo ampiasaina amin'ny endrika sy rafitra isan-karazany.Mety ho sandry malefaka entin'ny olombelona tsy voafehy izy io, manipulator serial ambany ambany amin'ny fahalalahana, na manipulator parallèle avo lenta amin'ny fahalalahana.Ny fampifanarahana dia mora kokoa.Miorina amin'ny tombony amin'ny manipulator kaopy suction, ity karazana manipulator ity dia mitentina ampahany betsaka amin'ny tsenan'ny manipulator.
teo aloha: Manipulator miaraka amin'ny Clamp
Manaraka: Crane voalanjalanja
Manipulator Cup Suction
Vacuum Lifter Kaopy Suction
Kaopy vacuum ho fanandratana